Planning to live in China, comes from Zimbabwe
i am just a simple and interesting person who is dedicated
sports , travelling and hanging out
Living in Yangpu, Shanghai Shi, comes from Zimbabwe
hiking , exploring nature
Im Nyaradzo Mhakah from Zimbabwe. I recently moved to China to ...
hiking , sports , reading
Living in wuhan, comes from Zimbabwe
I'm a Zimbabwean ,male ,21 years, currently in my final year of ...
football , chess , series
I am a teacher professionally and at heart. I love reading and ...
baking , cooking , Internet ,
Living in Nanchang, Jiangxi Sheng, comes from Zimbabwe
My name is Melody Mwaita, I am 29 years old and I come from Zimbabwe.
Reading Baking Travelling
I come from zimbabwe,in Bulawayo.
movies , reading
Living in Tongren, Guizhou Sheng, comes from Zimbabwe
I come from Zimbabwe and run a small business in gaming I am ...
My name is Pauline Ngwenya and I am from Zimbabwe. I am a hardworking ...
reading , drawing , site seeing
Come from Zimbabwe and intend to go to China
BUSI FROM ZIMBABWE
I am a young professional, self driven intelligent young man.
reading , interacting with different people , travelling and gyming
Living in dalian, comes from Zimbabwe